SPAM pamwe neindasitiri yekutumira mameseji | Martech Zone
SPAM neindaneti yekutumira mameseji
Svondo, Nyamavhuvhu 7, 2011 Svondo, October 4, 2015 Adam Mudiki
Mabhizinesi akarerutsa zvakanyanya kukanganiswa kwemeseji yekutumira mameseji. Kutumira mameseji, neimwe nzira inozivikanwa seSMS (Pfupi Meseji Sisitimu), yakaiswa mumumvuri pamusoro peanonyanya kufarirwa mafoni webhu kunyorera. Nekudaro, haisi foni yega yega ndeye smartphone uye inogona kushandisa maapp. Yese nhare mbozha inobvumira kutumira mameseji.
Sezvo mabhizinesi ari kudzoka kune ino isinganzwisisike svikiro, vazhinji vari kuzvidza mvumo inodiwa. Iyo indasitiri yaimboda zvakapetwa-mukati kuti igamuchire, asi yakabva yadonhedza izvo zvinodiwa kune imwechete yekupinda. SPAM iri pakukwira zvakanyanya uye pachave nemhedzisiro. Vazhinji vashandisi venhare vanobhadhariswa zvinyorwa zvese zvakagamuchirwa - kuvhura iyo indasitiri kumatare edzimhosva.
ichi ripoti inoratidza dambudziko hombe muindastiri yekutengesa mameseji. Nekusimuka kwemeseji meseji spam, kushanda kwekushambadzira kuburikidza neiyi chiteshi kunodonha zvakanyanya kana kwaenda kusati kwaongororwa. Nevanopfuura zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevanhu vekuUS vanogamuchira mameseji spam, inguva yekuti mabhizinesi vatange kuona kukanganisa meseji spam kune vatengi vavo nekusarudza vanopa software seTatango iyo yakagadza zero zero shiviriro yemeseji meseji spam. Derek Johnson, Tatango CEO
Muna Chikunguru 2011, meseji yekushambadzira mupi wepaTatango akaongorora vatengi mazana mashanu vekuUS kuti vawane ruzivo rwechiitiko chavo nemeseji meseji spam. Mhedzisiro yacho yakashandiswa kugadzira anotevera infographic pane mameseji mameseji spam.
68% yevakabvunzurudza vakapindura vanoti vagamuchira meseji spam.
Vakadzi vari pasi pemakore gumi nemanomwe ndivo vangangodaro vakagamuchira mameseji spam ne 17% yevakabvunzurudza vakapindura vachiti ivo vagamuchira meseji spam.
Vakadzi makumi mashanu nemashanu + ndivo vangangotambira mameseji spam ne55% yevakabvunzurudza vakapindura vachiti vakagamuchira meseji spam.
Varume neVakadzi vanogona kunge vari ivo vanogamuchira mameseji spam.
Meseji Yemashoko Kushambadzira naTatango.
Kurudziro yedu ndeye kugara tichishandisa nzira mbiri dzekupinda-mukati. Izvo zvinoda kuti mushandisi atange kunyorera kuburikidza newebhusaiti kana meseji meseji, ichiteverwa neaa yekusimbisa iyo yavanoda kunyorera. Patinoisa sevhisi iyi kune vatengi vedu pa Kubatanidza Nhare, tinokumbirawo rumwe ruzivo - senge zip kodhi. Izvi zvinotibvumidza kutumira mameseji gare gare na zipi kodhi, kune vatinonyorera. Izvi zvinoderedza huwandu hwakazara hwekutumira uye hunowedzera mamitengo ekupindura sezvo iwo mameseji ari enzvimbo akakodzera.
Adam Small Sunday, August 7, 2011 Sunday, October 4, 2015
Adam Small ndiye CEO we AgentSauce, yakazara-yakatarwa, otomatiki real estate kushambadzira chikuva chakabatanidzwa neakananga tsamba, email, SMS, nharembozha, zvemagariro midhiya, CRM, uye MLS.
Shandisa Screenshot Thumbnail Service
Infographics: Kugadzira QR Makodhi Kuongorora